कुन ढोका बाट खाने र कुन उमेरबाट सुरु गर्न?
जब परिवारमा नयाँ व्यक्ति देखा पर्दछ, नयाँ आमाबाबुसँग धेरै प्रश्नहरू छन्। तिनीहरू बच्चासँग जोडिएको सबै चीजको हेरचाह गर्छन्। अन्तिम स्थान लिइएन र बच्चाको राशन छैन। उदाहरणका लागि, आमा र पिताले कस्ता खानेकुरा र कुन खानेकुरा खानेकुरा सुरु गर्न रूचाउँछन्। र यो क्षण साँच्चै धेरै महत्त्वपूर्ण छ: बच्चा बढ्दैछ, र यसको विकासको लागि, यो भिटामिन र माइक्रोटेमेन्टमा अमीर खानेकुरा मात्र खाँचो पर्छ। यस लेखमा हामी कुन उमेरमा नयाँ उत्पादनहरू बच्चाको आहारमा सुरू गर्न सुरु गर्न जान्छौं र कुन कुरालाई विचार गर्नेछौं र यो पनि थाहा पाउनुहोस् कि पूरै खानाको लागि उत्तम पोलियजहरू के हुन्।
बच्चालाई वयस्क खानाको लागि तयार छ कसरी बुझ्न सकिन्छ
सिद्धान्तमा, यसले तपाइँलाई स्तनपान गर्दैछ वा तपाईंको बच्चालाई स्तनपान गर्दछ भन्ने कुरामा साँच्चै कुरा गर्दैन। पूरै खानाहरू परिचय गर्न मात्र, केवल विश्वास छ कि यस समयमा बच्चा बिरामी छैन। स्वस्थ बच्चा राम्रोसँग निद्राई र खान्छ, काम गर्दैन, जागिरको समयमा अपरिहार्य हिसाब लाग्दैन।
पहिलो पूरक फिडको लागि, यो दूध रहित चावल वा बटवाट पोड्रिज लिन उत्तम छ । यसमा कुनै नुन, कुनै दूध, कुनै शकर, कुनै स्वाद छैन। तपाईं सोच्न सक्नुहुनेछ कि यो अपमानजनक छ, तर वास्तवमा बच्चाले अहिले कुन मिठाई वा नुहाउने खानाको अर्थ थाहा छैन, र उनको लागि कुनै नयाँ स्वाद पनि अचम्म लागेन, असामान्य, तर रोचक हुनेछ। पहिलो पूरैको लागि डेयरी-मुक्त अनाज आदर्श हो। यो पहिलो छ यो तपाईंको क्रिमको मनपर्ने विनम्रता हुन सक्छ।
बच्चाको आहारमा परिचय लिन सुरु गर्नुहोस् अनाज चार महिना भन्दा अघि भन्दा आवश्यक छैन, तर यसलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छैन। यो4देखि6महिना सम्मको अवधिमा हुन्छ कि यो बच्चाको चाइविंग कौशल बनाउन सजिलो छ। यस उमेरमा बच्चाको शरीरले स्तन दूध वा अनुकूलित मिश्रणको तुलनामा भारी खानाको सामना गर्न सिकाउँछ।
तर तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि यी सबै सर्तहरु सशर्त हो। प्रत्येक बालिका व्यक्तिगत छ, र यदि संदेह मा, एक बाल रोग को परामर्श जो तपाईंलाई देख्नुहुन्छ। स्तनपानमा बच्चाहरु को लागि औसत एक वर्ष को लागी लगभग माना जान्छ, कृत्रिम कीरा को अनाज संग पूरक भोजन को शुरुवात - एक महिना या दुई पहिले को लागि।
पहिलो पटक कति दिन दिन?
त्यसोभए, खानेकुराको सुरुवात गर्नका लागि अनाजको प्रश्न हल गरिएको छ। अब चल्नुहोस कि बच्चाहरु लाई खाना को लागी कितना दिनुहोस। धेरै आमा र डाडहरू, धेरै पहिलो दिनबाट बेपरिभाषित, यो सही परिचय हुन विचार गर्दै 50-100 ग्राम पनीरको साथ एक भोजनको स्थानान्तरण गर्नुहोस्। तर तपाईं यसलाई कुनै पनि अवस्थामा गर्न सक्नुहुन्न, किनकि केहि हप्ताको बच्चा र तिनको शरीरले नयाँ खाना संग परिचित हुन सक्छ।
तपाईले पर्याप्त मात्रामा पर्याप्त केही समयको लागि कम्तिमा 5-10 ग्रामको साथ सुरु गर्न आवश्यक छ। बच्चा आधा सानो चम्मच दिनुहोस्, उनको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्, चाहे उनले स्वाद मनपर्थ्यो। त्यसपछि शरीरको प्रतिक्रियाको पालन गर्नुहोस्: क्रिमको पेटमा नवाचारलाई असर नगर्ने, चाहे कुनै पनि भागहरू थिए। र केवल यदि सबै क्रम मा छ र बच्चाहरु लाई शान्त देखि उनको लागि असामान्य खाना मा प्रतिक्रिया दिइएको छ, तपाईं लचर को उमेर-उचित दर को लागी दैनिक 5-10 ग्राम जोड सकते हो।
पूरक खानाहरूको लागि आदर्श समय
कुनै नयाँ खाना, कि मज्जा वा मसला मिलाएर, आज बिहान बिहानै दिइनेछ। कुनैपनि अवस्थामा तपाईंले अनौपचारिक खानालाई फिडिंगको बीचमा पेश गर्नुपर्दछ। पहिलो लम्पको लागि डेयरी-मुक्त अनाज मुख्य भोजन भन्दा पहिले दिइएको हुन्छ, जब बच्चा भोकाउनु हुन्छ। यसैले बच्चाले खाना मन परायो भने तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं दिनभरि बच्चाको प्रतिक्रिया देख्न सक्नुहुन्छ। यदि मुख्य भोजन पछि मलम को टुक्रा को टुक्रा दिनुहोस भने, यो सजिलै संग बाहिर जान सक्छ, र तपाईंलाई पाएंगे कि बच्चा को नवाचार को रुचि थिएन, वास्तव मा इनकार को कारण बच्चा को तपस्या थियो।
ढोका सुरु गर्न को लागी संग: buckwheat वा चावल - यो आमाबाबु सम्म छ। र नयाँ खाना बच्चाको मनपर्नेको लागि होइन भने निराश नगर्नुहोस्। केहि दिनको लागि यसलाई अलग गर्नुहोस्। साथै, नयाँ स्वाद प्रयास नगर्नुहोस्, यदि पहिलो इनपुट पछि, एक हप्ता भन्दा कम भयो।
बच्चाको लसुन र वजन
बालबालिकाहरूले शिशुलाई एक दलियालाई सल्लाह दिन्छन् भने उनीसँग अपर्याप्त वा औसत शरीरको वजन छ। यस्तो अवस्थामा, बच्चालाई चाँडै नयाँ खानामा पेश गर्नु पर्छ। यदि बच्चा अधिक वजन छ भने, पनीर लगाईनु हुँदैन, फलहरु र तरकारीको परिचय सीमित।
किसिमको पस्रेषण प्राथमिकता दिने: एक भण्डारमा खरिद गरेको वा स्वतन्त्र पकाएको?
प्रत्येक आमाबाबु आफैले निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ, आफैलाई पुष्प पकाउनुहोस् वा तयार बनाइएका व्यक्तिहरू खरीद गर्नुहोस्, जसलाई मात्र पानी, बच्चाको रेश्रोसँग पतित हुनुपर्छ। यस अवसरमा आमाबाबुहरूको टिप्पणी प्रायः विपरीत चीजहरू विरोध गर्दछ। पुरानो विद्यालयका व्यक्तिहरूले विश्वास गरेका छन् कि खरिदमा पाइलाजहरू त्यहाँ एक "रसायन" छन्, नयाँ पीडित निश्चित छ कि बाल खाना कसलाई व्यायाम गर्नुअघि तान्नुहोस् र यसकारण बच्चाको लागि यस्तो खाना पूर्णतया सुरक्षित छ।
कसरी पनीर पकाउने?
यदि तपाइँले कस्तो प्रकारको अनाजलाई अचम्मको सुरुवात गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने र मनपर्दो खाना बक्स बाहिर हुनुहुन्न, केहि सुझावहरूले तपाईंलाई चाँडो र स्वादिष्ट रूपमा पिज्जा तयार पार्न मद्दत गर्नेछ:
तपाईंको लागि सामान्य तरिकामा बखवाट वा चावल उडाउनुहोस्। तपाईंले विचार गर्नुपर्ने एक मात्र चीज: बच्चाको रेश्रोमा चीनी, नुन र तेल राख्नु हुँदैन। ब्रुकिंग सिंक पानीमा उत्तम छ, किनकि बच्चा डेयरी उत्पादनहरू खानेकुरा तयार छैन। तयार भोजन एक कटोरा ब्लेंडर र काट मा राख्नुहोस। तपाई सामान्यतया चलानी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंलाई पकाउने प्रक्रियाको गति बढाउन आवश्यक छ भने पहिले नै ग्रिन्ड गरिएको क्यामेरा पकाउनुहोस्। पहिला तपाईं कडा मेहनत गर्नु पर्छ, तर त्यसपछि तपाईं खाना पकाउने धेरै समय बचत गर्नुहुनेछ। त्यसोभए, तपाईंलाई राम्रो तरिकाले यो समूहलाई कुल्ला गर्नु, यसलाई सुखार्नु र कफी कपालमा पीस गर्नु, यसलाई विशेष छापिएको जारमा राख्नु पर्दछ। यो केवल पानी संग तयार अनाज को आवश्यक मात्रा मा भर्न को लागी बनी रह्छ र उबलते यसलाई कम गर्मी मा राखन को लागि पांच मिनेट भन्दा बढी को लागि राख्नुहोस। त्यसैले तपाईंको चावल वा बखतको पारा तयार छ। पहिलो भन्दा भन्दा धेरै सजिलो खाना पकाउन यस तरिकाले बच्चालाई लुकाउनुहोस्।
तेस्रो विधि पनि कम समय-उपभोग हुन्छ। तपाईं केवल additives बिना बच्चा बनाएको अनाज किन्न आवश्यक छ। पहिले नै समाप्त उत्पादन परीक्षण गरेको आमाबाबुहरूको समीक्षा अधिकतर सकारात्मक हो। आमा अनुसार, स्वादमा कुनै फरक छैन, र खाना पकाउने प्रक्रिया सजिलो छ।
कस्तो प्रकारको अनाज छान्नु हुन्छ?
धेरै आमाबाबुले विश्वास गर्छन् कि दलिया दलिया सबै भन्दा उपयोगी छ र यसको साथ बच्चालाई पहिले परिचय दिन्छ, तर यो पूर्ण रूपमा सही छैन। यो राम्रो तरिकाले बर्थवाट वा चावल अनाज संग सुरू गर्न राम्रो छ, किनकि तिनीहरू बच्चाको अझै पनि कमजोर शरीर द्वारा धेरै सजिलो हुन्छ। माथिको दोहोरो महिना भन्दा बढिसम्म ओटिएल पेश गरिएको छैन।
खाना पकाउने मक्खन जोड्नुहोस् - यो खाना बच्चाको लागि धेरै चिसो हुनेछ।
बखत लोहा र भिटामिनमा अमीर छ, यसमा धेरै मात्रामा ट्रेस तत्वहरू छन्, र अझैसम्म यसको कम से कम कार्बोहाइड्रेट छ। तर बर्थवाट एक बलियो एलर्जीन हो। यो, सम्भवतः यसको केवल नकारात्मक। चम्मचको टिपमा यो शाब्दिक रुपमा बच्चालाई प्रतिक्रिया दिनुहोस् र प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्। यदि कुनै परिणामहरू थिएन भने, साहसी रूपमा लाभांश भरपर्दो उमेरमा उचित दरमा ल्याउन।
चावल ग्रोटहरू बर्थवाटको रूपमा उपयोगी हुन्छन्। यसमा आठ भन्दा सक्रिय अमीनो एसिड र जटिल कार्बोहाइड्रेट हुन्छन्। यो अनाज चार महिना को उमेर देखि बच्चाहरुलाई सुरक्षित तरिकाले दिइन्छ। तपाईले एकै तरिकाले सुरू गर्नु पर्छ - सानो रकमको साथ, धीरे-धीरे सामान्यतया सामान्य लाई ल्याउनु पर्छ।
र अन्य पोड्रिजहरूको बारेमा के?
बाल्टीवाट र चावल अनाज तत्काल प्रवेश नगर्नुहोस्, मोती जौ, तामाङ वा अन्य प्रकारका अनाज। बच्चाहरू पहिले अनाज, सब्ज र फलफूलमा प्रयोग गरिन्छ जब यो महिनादेखि आठसम्म नयाँ घटकहरू सुरू गर्न राम्रो हुन्छ।
सबै मनपर्ने स्मिनाले पिज्जा पनि यो सफा गरिनु पर्छ - यो एकदम ठूलो खाना हो, उपयोगी पदार्थमा अमीर छैन। यो कार्बोहाइड्रेटमा ठूलो मात्राको कारणले गर्दा, बालबालिकाहरूले कम शरीरको वजनका साथ बच्चाहरूको लागि मंगाको सिफारिस गर्छन्।
अब तपाईं जान्दछन् कुन अनाज खाना खाने शुरू गर्न, तर डरो नगर्नुहोस् र तपाइँको बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यको बारेमा तपाईका पर्यवेक्षक बालबालिकाको प्रश्न सोध्न संकोच नगर्नुहोस्। क्रुमको व्यक्तिगत विशेषताहरू जान्न, डाक्टरले तपाईलाई सही मार्गमा मार्गदर्शन गर्नेछ, सबै सम्भावनाको नगद वर्णन गर्दछ।
तपाईंको बच्चाको आवश्यकताहरुसँग सम्झौता तपाईं धेरै चाँडै गर्न सक्नुहुनेछ, उसलाई हेर्नु, उनको प्राथमिकताहरू, शरीरको प्रतिक्रिया। र पूरै भोजनको पहिलो परिचय पछि केहि महिना पछि, तपाईं आफ्नो बच्चालाई लागि नयाँ पाक व्यंजनको साथ खुसी पार्न सक्नुहुन्छ, जुन, कुनै संदेह छैन, उसले पनि मन पराउनेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एक स्वस्थ बच्चा हो। केहि ग्राम सजिलै गम्भीर घातक अनाजहरु संग शुरू गर्दै, तपाईं आफैलाई थाहा छैन कि तपाईं गाजर दुवै को लागी सबै चीज खानु हुनेछ, गालहरु को लागी। स्वस्थ र आनन्दित हुनुहोस्।
जब एक बच्चा पहिलो दाँत देखिन्छ? लक्षण र आफ्नो बच्चा मदत
कति चाँडो आँखा अन्तर्गत झुर्रियाँ हटाउन
Silenus - एक अभिभावक र Dionysus को साथी। चित्रकला र मूर्तिकला मा Silena भूमिका
गुदा fissure परम्परागत औषधीको को उपचार।